एसरको विश्वकैै पातलो ल्यापटप, यस्ता छन् विशेषताहरु
एसर स्विफ्ट ७
काठमाडौं । एसरले आफ्नो एसर स्विफ्ट ७ लाई विश्कै पातलो ल्यापटप भएको बताएको छ । दुई महिनाअघि कम्पनीले एसर स्पिन ३, गेमिङ ल्यापटप एसर निट्रो ५ र क्रोमबुक ११ को लन्च गरेको थियो ।
क्याबिनेट बैठकमा मन्त्रीहरुले गरे ल्यापटपको प्रयोग, पेपरलेस भयो बैठक !
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद बैठकमा विहिबारदेखि कागजको सट्टा ल्यापटप प्रयोग भएको छ । प्रविधिमैत्री हुने भन्दै मन्त्रिपरिषदको बैठकमा कागजको प्रयोग नगरिएको हो । बिहीबार सुरु भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री र सबै मन्त्रीहरुले कागजको सट्टा
एप्पलद्वारा म्याकबुक प्रो ल्यापटपको अपडेट, अब तीव्र गतिमा चल्ने
काठमाडौं । चर्चित प्रविधि कम्पनी एप्पलले म्याकबुक प्रो ल्यापटपको नयाँ संस्करण सार्वजनिक गरेको छ । यसमा नयाँ प्रोसेसर, किबोर्ड र डिस्प्ले प्रविधिसँगै ह्याण्ड्सफ्रि सिरीको पनि व्यवस्था गरिएको कम्पनीले जनाएको छ
काठमाडौं । एसरले आफ्नो एसर स्विफ्ट ७ लाई विश्कै पातलो ल्यापटप भएको बताएको छ । दुई महिनाअघि कम्पनीले एसर स्पिन ३, गेमिङ ल्यापटप एसर निट्रो ५ र क्रोमबुक ११ को
के एचपीका ल्यापटपले तपाईंको जासुस गर्दै छ ? पत्ता लाग्यो लुकाइएको सफ्टवेयर
युरोप । चर्चित ल्यापटप कम्पनी एचपीका सयौँ ल्यापटपमा अग्रिम रुपमै (प्रि इन्स्टल्ड) लुकाएर राखिएको सफ्टवेयर पत्ता लागेको छ । प्रविधिको सुरक्षा अन्वेषक माइकल म्यांगले एचपीमा लुकाएर राखिएका किलगिङ कोडहरुयुक्त अग्रिमरुपमै राखिएका